China aka-ẹkenịmde laser remote methane gas ihihi detector (JJB30) Manufacturer and Supplier | Topsky
Aka-ẹkenịmde laser remote methane gas ihihi detector bụ a elu-tech elu technology na-achọpụta rụọ methane esi na n'ebe dị anya. Ọ bụ ọgbọ ọhụrụ nke ihihi nchọpụta ngwaahịa, nke ukwuu mma arụmọrụ na nchekwa nke na-eje ije nnyocha, na ngwá dị, ọtụtụ ghọtara n'ụwa nile.
Ọ na-eji igwe nyocha ọhụụ laser (TDLS) iji chọpụta ngwa ngwa gas na-agbago ruo mita 30. Ndị mmadụ nwere ike ịchọpụta nke ọma iru ma ọ bụ iru ebe a na-apụghị iru n'ime mpaghara dị nchebe, dịka okporo ụzọ na-arụsi ọrụ ike, paịpụ pọpụl, ụlọ elu toro ogologo, paịpụ ogologo, ụlọ ndị a na-anọghị na ya na ihe ndị ọzọ. Ojiji ya abughi nani n 'oma ime ka oru na ogo nke nyocha nyocha di nma, kamakwa odi mfe nke na apughi iru ma obu sie ike iru ebe nyocha a.
Ọ dị arọ, obere ike ike ma nwee ike ịkwado ọrụ mmụba na-aga n'ihu ogologo oge ma nwee ike ịmegharị maka ọtụtụ mkpa gburugburu ebe obibi (dịka ọtụtụ ọnọdụ ọrụ na nrụgide na-arụ ọrụ, oke iru mmiri, wdg). Ngwaahịa a nwere mmetụta nhụsianya na-emetụ n'ahụ, naanị 0.1 sekọnd iji nweta nsonaazụ nnwale ahụ, nchọpụta ziri ezi ruo 100ppm-m ma ọ bụ ọbụna obere ma nwekwaa ike ịhazi ya dịka usoro nnyefe ndị ahịa, dị ka Bluetooth.
1.Intrinsically mma ngwaahịa;
2. Gas (methane) ahọpụtara, enweghị gas ndị ọzọ, vepo mmiri, nnyonye anya uzuzu;
3. Nchọpụta dị omimi: nchọpụta nke methane na mịga gas na-ekpuchi gas na anya nke mita 30;
4. Obere obere, ọkụ dị nfe, dị mfe ibu;
5. Ike oriri dị ala, nwere ike ịrụ ọrụ ogologo oge;
7. Egwu shockproof, waterproof na dustproof arụmọrụ;
8. Nzaghachi ngwa ngwa, nnukwu ihe nha na oke nha;
9. Ọ nwere ike na-aghọta data ndekọ na Bluetooth nnyefe ọrụ.
3. Nkà na ụzụ Nzuzo
Nchọpụta usoro: harmonic laser spectrum theory
Nchọpụta nke gas: CH4 (NH3 / HCL / C2H6 / C3H8 / C4-C6 optional)
Ensdị ihe mmetụta: laser infrared
Ogologo uzo: 0-10% vol (0 ka 99,999 ppm-m)
Nchọpụta anya: ruo 30m
Nchọpụta nchọpụta uche: 0-15m, 5ppm-m
Nchọpụta anya nke 15-30m, 10ppm-m%
Ihe nha anya:% 10% @ 100 ppm-m (2m)
Oge nzaghachi: 0.1 s (1s dị ka sitere na)
Oti mkpu: Digital na-egbu maramara mkpu
Ngosipụta ọnọdụ: LCD
Nchaji mode: odori oche, 110-240VAC, 50 / 60Hz
Suppnye ọkụ: Batrị Lithium na-akwụ ụgwọ (Batrị nwere ike ịgbanwe)
Oge ọrụ: rụọ ọrụ 10 awa ma ọ bụrụ na ebubo zuru ezu
Ọnọdụ ọrụ: -20 ℃ ~ 50 ℃
Ikwu iru mmiri: ≤99%
Akụkụ Mpụga: 132mm × 74mm × 36.5mm
Igwe igwe: 360g
Ihe: ABS + PC
Ọrụ nyocha onwe onye na-abịa na nnwale onwe na nhazi ọrụ, na-enweghị mkpa maka mmezi kwa ụbọchị
Klas nchedo laser: Klas IIIR
Asambodo: Exia II CT6
Klaasị nchedo: IP65
Nhọrọ ngwa: eriri ergonomic
Nke gara aga: JJB30-2new ụdị Aka-ẹkenịmde laser remote methane gas ihihi detector
Osote: Silent akuakuzinwo C7
Portable Methane & Oxygen 2 CH4 ＆ O2 na 1 g ...
CNH50-500 NO2 & NO nchọpụta gas